SPY017 - OMG Mini Portable Spy Hidden Camera - Vahaolana OMG
Mini Spy Hidden Camera 720P miaraka amin'ny fahitana ny alina sy ny detection PIR Motion sensor, ny horonan-tsary sy ny horonan-tsary mifototra amin'ny 1000mAh natsangana Max 1 taona mipetraka
Zavatra tsy ampy / fanononana X- Tsy mitovy amin'ny fakan-tsary miafina hafa izy io, misy loha loha, afaka mamadika ny fakantsary amin'ny fomba samihafa amin'ny lafiny hafa. Amin'ny fonosana tsara tarehy, afaka manafina azy amin'ny fomba tsotra ianao ao anaty horonan-tsoratra na sehatr'asanao mba hahazoana antoka fa tsy misy olona manakorontana ny zavatrao, tsara ho an'ny birao, mandeha, mikarakara ary ny fiarovana an-trano.
True Night Vision Hidden Camera: Miaraka amin'ny 6 LED miloko mainty, ny fakan-tsary kely miafina dia afaka miasa amin'ny alina miaraka amin'ny fandehan-javatra amin'ny alina ka hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 25 tongotra, izay tsara lavitra noho ny fakan-tsary hafa any amin'ny tsena. Azonao ampiasaina amin'ny andro sy ny alina, ireo sary roa ireo dia tsara sy mazava ao amin'ny 1280 x 720p HD. Ny feo dia mazava sy mazava.
Ny fakan-tsary fitsikilovana tsara indrindra: Miaraka amin'ny sensor Sensor PIR, afaka miasa tsara amin'ny fomba fitadiavana fihetsika izy, azonao atao ny mametraka izany ary mamela izany any, rehefa avy atsy ho atsy, dia hivezivezy ny fakantsary mba hanoratana avy hatrany. Miaraka amin'ny batterie 1000 mAh natsangana, ny mpitsikilo dia manohana hatramin'ny taona 1 (lava kokoa noho ny mpifaninana hafa) ho an'ny mode detection motion mode. Mamaritra: Ao amin'ny fomba fijerin'ny mouvement, ny fakantsarin'ny fakantsary dia mila mitodika amin'ny torolalana PIR.
Loop Recording Portable Camera: Ity rindrambaiko malaza ity dia manohana ny karatra 10 microSD ho an'ny karazana 8 GB sy max 32GB farafahakeliny (karatra microSD NOTE) ho an'ny firaketana ny loop. Raha feno ny karatra, dia manova ny lahatsary tranainy indrindra amin'ny vaovao izy io.
Inona Ianao Raha: Camera miafina, cable USB USB, PIN, boky torolàlana, ary ny fanamafisana ankapobeny 12-volana
Ny fihetsik'ireo kibon'ny PIR dia mamela ny famoahana an-tserasera hatramin'ny taona 1.
Ny zoro 120 degre sy zoro mihodina miorim-paka miitatra ny fomba fijerinao.
Fotoana maizim-potoana mazava sy andro fahitana mainty fotsy. (Ny tarika mainty 6pcs dia tsy hampirehitra ny fampiasana azy)
Soraty amin'ny horonan-tsarimihetsika hoe: Fotoana isan'andro ny fandraisana an-tsoratra hatramin'ny 4 ora sy ny alina manomboka ny firaketana tsy tapaka hatramin'ny ora 1.5 rehefa feno kamio tanteraka.
Natsangana tao anaty batterie batterie 1000mah ho mora ampiasaina ary azo ampiasaina.
Fanohanana fakan-tsary hatramin'ny XDXXGB micro sd karatra (format FAT32) (tsy misy).
Ny audio dia mety ho mora foana midina na amin'ny faran'ny fakantsary.
Ny toro-làlana sy ny torolàlana manjavozavo dia mora takarina sy ampiasaina.
Daty maotera sy daty hodiavina ao anatin'ilay lahatsary.
Fampiasana samihafa ho an'ny birao, mandeha, mivarotra, fiarovana an-trano. (ankizy, biby fiompy, antsy, olon-dehibe)
Ny halavan'ny andry 120 sy ny 180 degre, mamelatra ny endrik'ilay fikandrana.
Ny mainty 6pcs dia mamoaka ny andia-maso izay tsy hita maso sy miafina. (Ny LED dia tsy miseho amin'ny fampiasana azy) miaraka amin'ny fahitana fahitana alina hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 25 tongotra.
Built in 1000mAh Battery rechargeable
Manoritra anaran-dahatsoratra tsy tapaka mandritra ny andro isan'andro hatramin'ny ora 4 ora sy ny horonan-tsary tsy mitsaha-mitohy hatramin'ny ora 1.5 raha sarotra tanteraka ny fakantsary.
Product net lanja: 9.6 ounces
Mijanona ho an'ny herinaratra: 10uA
PIR fantatry ny PIR: 60 degrees
PIR famantaranandro: 15-25 tongotra
Max PIR dia maharitra: 1 taona
Andron'ny fotoana famoahana herinaratra fanodinana: 220mAh
Fotoan'ny famoahana Max andro: 4 ora
Fanehoana an-tsarimihetsika fahatsiarovana alina 650mAh
Ny fahitan'i Max alina fahitalavitra: 1.5 ora
Fiatoana feno: 3.5 ora
PIR MD video record: Mikasika ny minitra 1 isaky ny rakitra
Raketo tsy tapaka: momba ny minitra 10 isaky ny rakitra
Toby SD Max: 32GB
Fanoratana ny loop: Support
4.3 X 3.1 X 2.1 santimetatra